अर्थ – Page2– Nepali Public
संघीय कानून संशोधन गरेर भएपनि करमा देखिएको अन्योलता हटाइन्छ : अर्थ मन्त्री डा. खतिवडा
असोज ८, नवलपरासी । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानून संशोधन गरेर भए पनि करका विषयमा देखिएका अन्योलता समाधान गरिने बताउनुभएको छ । छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको उद्घाटन गर्दै अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले...
फ्लोभेल इनर्जीको कष्टुमर सम्मेलन २०१८ सम्पन्न
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भारतिय ईलेक्ट्रो मेकानिकल कम्पनि फ्लोभेल इनर्जी प्रा.लि.ले यहि सेप्टेम्बर २०का दिन काठमाण्डौंमा एक समारोहका बिच आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कष्टुमर सम्मेलन २०१८ सम्पन्न गयो । उक्त कार्यक्रममा नेपालको जल बिद्युत उत्पादन तथा बिकास क्षेत्रका उद्यमी, लगानीकर्ता, परामर्शदाता,...
जथाभावी कर लगाइएको छैन : अर्थमन्त्री खतिवडा
असोज ७, चितवन। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करमा देखिएका दुविधाहरु क्रमशः हल हुदै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले व्यवसायीसँग आफु छलफलमा रहेर करमा देखिएका दुविधाहरुलाई मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । आइतवार नवलपुरको कावासोतीमा करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवडाले...
आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न जर्मनीद्वारा सात अर्ब ५० करोड अनुदान
असोज ५, काठमाडौं । जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप...
असोज २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा अर्थतन्त्रको आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले साउन र भदौ महिनामा...
कर प्रशासनका कर्मचारीलाई निष्ठापूर्वक काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, १ असोज । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रशासनका कर्मचारीलाई निष्ठापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कर असुलीमा कसैले औँला ठड्याउन नपर्ने गरी काम गर्न कर प्रशासनका कर्मचारीलाई सचेत गराउनु भएको हो । काठमाडौंमा आज आयोजित...
सम्पूर्ण नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यकः अर्थमन्त्री खतिवडा
असोज १, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्पूर्ण नेपालीलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मध्यम करदाता कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री खतिवडाले सम्पूर्ण नेपालीलाई अब करको दायरामा ल्याउने समय आइसकेको बताउनु भएको हो । तर, अर्थमन्त्री...
गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशकको पद धरापमा !
भदौ ३१, काठमाण्डौ । गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीको पद धरापमा परेको छ । अपारदर्शी गतिविधि र नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनको पद धरापमा परेको हो । हालै सम्पन्न बैठकबाट कोषका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक...
Peभदौ ३१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशभित्रको श्रम बजारमा रहेका सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । कर्मचारी संचय कोषको ५७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले सरकार सबै श्रमिकलाई पेन्सनको दायरामा ल्याउन कानून बनाउन...
वृद्धि गरिएको कर घटाउने निर्णय
भदौ ३०, धनुषा । नेपाली कांग्रेस र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबिच वृद्धि गरिएको कर घटाउने सम्बन्धमा सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर कार्यसमितिले शनिवार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेका कर , गैर कर...